Ururka Ubax Foundation oo deeq dawo ah gaarsiiyay MCH-ka Boondheere - Latest News Updates
Ururka Ubax Foundation oo deeq dawo ah gaarsiiyay MCH-ka Boondheere
Ururka samafalka iyo gargaarka Ubax Foundation ayaa shixnad daawo ah waxa uu gaarsiiyay MCH-ka degmada Boondheere ee gobolka Banaadir, taasi oo isugu jirta qalab iyo daawooyin lagu dabiibo haweenka uurka leh iyo caruurta.
Waxaa kale oo deeqda gargaarka ah ka mid ahaa shixnad daawo oo lagu dabiibo haweenka xaamilada ah ee iyagu soo booqda xarunta caafimaadka MCH-ka degmada Boondheere.
Haweeneyda maamulaha ka ah MCH-ka degmada Boondheere oo lagu magacaabo marwo Ruqiyo Maxamuud ayaa ka guddoontay deeqda kala duwan oo ururka Ubax Foundation u wakiishay Maxamuud Xasan Cumar (Aduunyo).
“Waxaan u mahad celinayaa ururka Ubax Foundation oo deeqda gargaarka ah na soo gaarsiiyay, mana aha markii ugu horeysay” ayay tiri marwo Ruqiyo oo sheegtay in horay dhowr goor la barbar taagan daryeelka dadka danta yar.
Dhinaca kale marwo Ruqiyo ayaa sheegtay in qalabka caafimaad uu wax weyn ka tarayo isla markaana daboolayo baahiyaha caafimaad ee MCH-ka, iyadoona xustay in horay ay u heysteen dhibaatooyin ay ku qabaan dawo yari iyo qalab la’aan, balse haatan ay meesha ka baxday taasi.